“Mijanona an-trano izahay androany”: ilay hira faneva tsy nampoizina ho an’ny fihibohana noho ny COVID-19 ao Rosia · Global Voices teny Malagasy
Hira tamin'ny 2017 miventy ny tombony amin'ny fihibohana no ventesin'ireo Rosiàna
Voadika ny 22 Mey 2020 16:53 GMT
Pikantsary avy amin'ilay lahatsary “We're staying home today” (mijanona an-trano izahay androany), YouTube, 2018, an'i Hadn Dadn
Jereo ny fandrakofana manokan'ny Global Voices ny fiantraika manerantanin'ny COVID-19.
Raha manamaivana tsikelikely ny fihibohany noho ny COVID-19 i Rosia, dia hira iray nataon'ny tarika iray Indie avy ao Maosko Hadn Dadn no nasandratra ho toy ny “hira fanevan'ny fanibohan-tena.”
Ny “Mijanona an-trano izahay androany” dia lasa ho ilay hira mitovy aminy, “Mijanona an-trano izahay rahampitso. Sy raha afakampitso. Sy aorian'izay.”
Rehefa jerena ny hamafin'ny fepetra takiana amin'ireo Rosiàna mba hihiboka an-trano, indrindra ao Maosko, tsy mahagaga raha nahakitika ny fihetsehampo mora tohina ilay fanomezamboninahitra somary masira nentin'ilay hira. Nifampizaràna tsy tapaka tao amin'ny tambajotra sôsialy ilay izy. Nikarakara hetsika tselatra iray ny fahitalavitra tsy miankina TV Rain, niarahana tamin'ireo vehivavy sangany mpilalao, mpanolotra amin'ny fahtalavitra, ary mpitoraka bilaogy an-dahatsary, nihira ilay hira avy any an-tranon'izy ireo.
Ny fitomboan-daza tampok'ilay hira dia ahitàna taratra ny fiovàn'ny fahazaran'ireo Rosiàna mihaino hira rehefa niaina fihibohana. Raha nanoratra ho an'ny Kommersant tamin'ny 5 May, ilay mpamakafaka anaty onjampeo, Dmitry Butkevich, dia nitanisa angondrakitra avy amin'ny Zvuk, ilay tolotra malaza mpandefa lahatsary, ka voalaza anatin'izany fa nialàn'ireo Rosiana ny lisitra fihainony tamin'ny Martsa sy Aprily, ka mozika somary ahazoana aina kokoa no nasolony azy, izay afaka hanampy hamokatra bebe kokoa sy hanalavirana ny rarintsaina. Araka ny nanampoizana azy, nomarihany ihany koa ny fitomboan'ny fahalinana amin'ireo hira nosoratana manokana ho an'ireny fotoana tsy mahazatra ireny, toy ilay fandihizana Coronaminus an'i Gidayyat sy Gazan, Quarantine an'i Kis-Kis, Let's stay at home an'i Olga Buzova sy ny Pandemic an'i Byanka.
Nandritra ireo volana voalohandohan'ny taona 2020 no nandraketana ireny hira rehetra ireny ho setry avy hatrany hiatrehana ny valanaretina COVID-19. Saingy tsy mahazatra ao anatin'izany ny hiran'ny Hadn Dadn, na teo aza ny lazany, satria efa tamin'ny 2017 izy io no voasoratra ary nivoaka tao anatin'ilay rakikira Secret Album an'ny tarika nivoaka tamin'ny 2018. Raha ny filazan'ilay “lead soloist” Varvara Kramova, ny tonony dia miresaka ny fitsidihana iray tany Kaokazy Avaratra niarahana tamin'ilay mpamokatry ny tarika, Anton Moiseyenko, izay nihevitra ny hiandry ny taona vaovao miaraka ami'ireo nahitany masoandro sy hitety ilay faritra. Saingy taorian'ny andro efatra nitsidihana ireo tanàna misy ranomafàna toa an'i Kislovodsk sy Pyatigorsk, leo ireo ray sy renin'i Moiseyenko. Nangatahan'izy ireo i Moiseyenko sy Kramova mba hijanona an-trano fa tsy handeha hitety an'i Zheleznovodsk. Nefa ireto roa ireto nanohy sy nandeha tsy nisy azy ireo tao anaty hira iray fanoherana, nandevona ny alahelony tsy navela hanatontosa ny faniriany hitsangantsangna.
Rehefa nitafa tamin'ny BookMate, anisan'ny ao anatin'ilay fanentanana #СидиЧитай (rehefa miresaka momba ny boky ankafiziny mandritra ny fanibohana tena ireo olona malaza), nosaintsainin'i Kramova ny fiaviana tsotra dia tsotran'ilay hira sy ny dika entiny:
Raha nandeha ho eny amin'ny toerana fandraisana fiara iraisana izahay mba ho any Zheleznovodsk, nihiaka tamin'ny feo mandreraka be izahay hoe “mijanona an-trano izahay androany! Mijanona an-trano izahay rahampitso!” Tsy nosaininay mihitsy ny hoe ho lasa hira fanevan'ny fanibohan-tena ilay hira.
Iray tamin'ireo hira marobe nosoratan'i Kramenko nandritra ilay dia io, ary tany am-piandohana izy tsy resy lahatra hoe mety hibaribary ho hira malaza ilay izy.
Toa nahazendana azy ny zava-nitranga. Ohatra, rehefa nilalao ilay hira ny Hadn Dadn tamin'ny Martsa, nandritra ny famaranana ny ‘Bol’, na “Pain”, fetibe ho an'ny mozika fanao ao Maosko ary alefa amin'ny aterineto, miteny i Kramova fa sady zendana izy no faly nahita hoe marobe tamin'ireo mpanatrika no nahay nihira ny tonony. Nefa ankehitriny ilay mpiangaly mozika dia mino fa mety afaka manaporofo ny fahaverezany ny dika entin'ilay hira, satria ireo ho mpihaino amin'ny hoavy dia mampifandray azy amin'ilay fotoana mampivarahontsana itrangan'ny valanaretina COVID-19. Araka izay nambarany tamin'ny gazety tsy miankina Meduza tany am-piandohan'ny Aprily fa:
Ho ahy dia toy ny hoe rehefa mifarana ity valanaretina ity, dia ho toy ny nofy ratsy sisa no hahatsiarovana io hira io. Noho io fampifandraisana io, ho faty ilay hira. Raha ny marina, efa reraka sahady izahay mihira azy io isaky ny kaonseritra : efa fotoana elabe no nilalaovanay azy. Fotoana elaela no efa nanofinofisanay sy Anton momba izay mety hanadinoana ilay hira. Famelàna dokambarotra hampiasa azy ve? Sa zavatra hafa? Efa sahirana mihitsy aza izahay nanandrana nanao izay tsy hitrangan'izany; tonga hatramin'izao dika isankarazany nampiasàna ‘acoustiques’ rehetra izao. Fa toy ny hoe ilay hira izy tenany ihany no hahafaty azy.
Mifanaraka tsara amin'ny vanimpotoana iainana ankehitriny ao amin'ny firenena izay amin'izao fotoana izao dia ahitàna tranganà coronavirus miisa 10.000 isanandro ireo tononkira maharary an'ny Hadn Dadn. Ary raha ny vinavinan'ireo andiany taty aoriana mpahay momba ny valanaretina, mety mbola hanako elaela ireo tenin-dry zareo ireo.
Saingy misy fanafahana vitsivitsy ihany ao anatin'ireny tononkira ireny, satria ireo mpihira mijanona an-trano dia afaka mangataka amin'ireo namany mba hisolo tena azy ireo hanao fitetezana sy hampita fiarahabàna amin'ny naman-dry zareo. Na ohatra aza mety ho voaràra izay fihetsika tsotra izay amin'izao fotoana izao, toy ny anamarihan'ny fanehoankevitry ny olona iray eo ambanin'ilay lahatsarin-kira ofisialy.
Mijanona an-trano izahay androany
Mijanona an-trano izahay rahampitso koa
Sy raha afakampitso
Mivoaha tsy misy anay
Mandehana mitsangantsangana ho solotenanay
Hiaino tsara ny dianareo
Ampitao amin'ny olona rehetra ny arahaba avy aminay
natao tato an-trano omaly
Mivoaha tsy misy anay, sy ny sisa
Mamanàla ao ivelany ao
Mafàna ato an-trano, sempotra izahay
Afaka mivoaka eo ambany lavarangana izahay
Misy rano mihitsy aza ao an-trano fandroana, ary mafàna lalandava
Tsy ilainay ny mandeha mankany amin'ny toerana fandroana na toerana hafa
Eny, raha tena resaka matotra ho anareo izy ity, manaova akanjo mafàna
Mandraisa minibus, 45 robla monja izay
Hihazakazaka ho aiza ianao?
Inona no adinonao?
Maninona ianao no tsy maintsy mandeha?
Efa in-jato izahay no tany
Ividiano sary iray aho
Ifidiano iray mahafinaritra
Hojereko rehefa alina
Manana trano fisotroana kafe i Natalya, fisakafoanana ny an'i Ahmed
Tsy mampaninona anay na tsy ho hitanareo any aza izahay
Misy rano mifantsitsiatra ao, dia voromahery, dia lalankely akaikin'ireo tranolay
6 ora izayRosia